पहिलो नेसन्स लिग फाइनलमा यी ३ बार्सिलोना खेलाडीको जादु !! - Experience Best News from Nepal
पहिलो नेसन्स लिग फाइनलमा यी ३ बार्सिलोना खेलाडीको जादु !!
पहिलो पटकको यूएफा नेसन्स लिगको उपाधि पोर्चुगलले जितेको छ भने बार्सिलोनाका ३ खेलाडीको उपस्थिती उक्त फाइनल खेल नेदरल्याण्ड र पोर्चुगलको खेलमा रहेको थियो । बार्सिलोनाका विकल्प गोल रक्षक जास्पर किलेस्सेन, अर्को सिजनका मिडफिल्डर फ्रान्की डी जोंग साथै डिफेन्डर नेल्सन सेमेडो ।
यी बार्सिलोना खेलाडीले फाइनलको हिस्सा लिएका थिए । सेमेडो पोर्चुगलबाट दुवै खेल नेदरल्याण्ड विरुद्ध र स्विजरल्याण्ड विरुद्धको खेलमा पूर्ण आवर्द थिए ।
डी जोंग र किलेस्सेनको भूमिका नेदरल्याण्डलाई फाइनलसम्म पुर्याउनका निम्ति अहम भूमिका निर्बाह गरेका थिए । नेदरल्याण्डले नेसन्स लिगको फाइनलसम्मको यात्रा तय गर्नका निम्ति फ्रान्स, जर्मनी र इंग्ल्यान्ड जस्ता मजबुत टिमलाई पाखा लगाएका थिए ।
डी जोंगको खेलबाट निकै प्रभावित रहेको पाइन्छ भने बार्सिलोनाका निम्ति अर्को सिजनका निम्ति चयनमा रहेको खेलाडीको खेलबाट बार्सिलोना स्वत प्रभावित थियो नै । च्याम्पियन लिगबाट नै डी जोंगको खेलमा बार्सिलोना खुशी देखिन्छ, आउदै गरेका खेलका निम्ति बार्सिलोना आशावादी देखिन्छ ।
इतिहास बनाउन चुकेका नेदरल्याण्डका निम्ति बार्सिलोना डिफेन्डर सेमेडोको भूमिका भने प्रशंसनीय थियो ।
रिपोर्ट : बार्सिलोना सुपरस्टार युनाइटेडलाई प्रस्ताव ; इंग्लिश क्लबको रोजाईमा सम्भावना ??
राकीटिचले बार्सिलोना छोड्ने सम्भावना !! के छ पछिल्लो अपडेट ??
BarcelonaFrenkie de JongUefa Nations League
१५ पटकको विजेता विरुद्ध आजसम्म कोपा अमेरिका नजितेको – उरुग्वे र इक्वेडरबीच प्रतिस्पर्धा
कस्तो थियो रोनाल्डोको प्रिमिएर लिग यात्रा ! रोनाल्डो ल्याउन बार्सिलोना र मड्रिडको यस्तो थियो भिडन्त !!
युनाइटेडका यी स्टारलाई मड्रिडमा ल्याउने चाहनामा एडेन हाजार्ड !! (अफवाह)
विश्व रेकर्डमा एम्बाप्पे मेस्सी रोनाल्डोलाई पारे पछाडी !! कसैले उनको रेकर्ड तोड्न नसक्ने दावी !!
३२ वर्षमा मेस्सी खेलमा पूर्ण छन् !! मेस्सीलाई बालोन डी’ओर जित्न सकस छ : फाब्रेगास
सार्री युभेन्टस जाने, लाम्पार्ड चेल्सीका नयाँ प्रशिक्षक